China Abavelisi besikhululo esingaphantsi komhlaba esidityanisiweyo kunye nababoneleli |Shengte
Isikhululo esingaphantsi komhlaba esidibeneyo
Isitishi esingcwatyiweyo kukungcwaba ngokupheleleyo ibhokisi yemveli yesiguquli kunye nebhokisi engcwatyiweyo engaphantsi komhlaba, kwaye umhlaba awuchaphazeli ukusetyenziswa.
Yintoni isikhululo esingaphantsi komhlaba esidityanisiweyo?
Uluhlu lwe-ZBW-D oluphantsi komhlaba oludibeneyo lwe-substation luyi-substations epheleleyo edibanisa iikhabhinethi zokutshintsha kwe-voltage ephezulu, i-transformers engcwatywe, kunye neekhabhinethi zokuhambisa amandla aphantsi.Isisiseko senkampani yethu ukuze sihlangabezane neemfuno zokwakhiwa kwedolophu kunye nokukhuselwa kokusingqongileyo kwisitishi esidibeneyo.Uluhlu lweemveliso eziphuhliswe kwaye ziyilwe e-China.Isitishi esingaphantsi komhlaba esidityanisiweyo sineenzuzo zobuchwepheshe obuphambili, inkangeleko entle, ingxolo ephantsi, ukusebenza okukhuselekileyo nokuthembekileyo, ukugcinwa okufanelekileyo, ubume obubambeneyo, kunye neenyawo ezincinci.Ilungele iindawo zikawonke-wonke zasezidolophini, izitalato, iipaki, iindawo zokuhlala, iindawo zokuhlala ezibukekayo, njl. njl. Esi siza sisetyenziselwa ukufumana nokusasaza amandla ombane kwinkqubo yokuhambisa umbane.Kwinkqubo yonikezelo lwamandla, inokusetyenziswa kwinkqubo yokusasazwa kombane womnatha weringi, kwaye ingasetyenziswa kubonelelo lwamandla amabini okanye inkqubo yokuhambisa amandla etheminali yemitha.
1. Umphakamo awudluli kwi-1000m.
2. Ubushushu be-Ambient: elona qondo lobushushu liphezulu ngu-40 ℃, elona qondo lisezantsi -25℃, elona qondo lobushushu liphezulu lemihla ngemihla alidluli kwi-30℃, kwaye umahluko wemihla ngemihla ngu-≤20℃.
3. Ukufuma okunxulumene komoya akudluli kwi-90% (+25℃).
4. Isantya somoya wangaphandle asidluli kuma-35m/s.
5.Ukuthambekela komhlaba akudluli kwi-3 °.
6. Akukho ngozi yogqabhuko-dubulo, umlilo, ungcoliseko olukhulu, ukubola kweekhemikhali kunye nokungcangcazela okukhulu kwindawo yofakelo.
7. Xa le miqathango ingentla yokusetyenziswa ayinakuhlangabezana neemfuno, umsebenzisi unokuthethathethana nenkampani yethu ukusombulula.
Isitishi esingaphantsi komhlaba esidityanisiweyo sahlulwe sibe ngamacandelo amabini: umhlaba kunye nangaphantsi komhlaba.Inxalenye yomhlaba ihlukaniswe kwiikhabhinethi zokutshintsha kwe-high-voltage, iikhabhinethi zokusabalalisa amandla aphantsi-voltage kunye neegobolondo, kwaye ngaphantsi komhlaba i-transformer engcwatywe kunye nebhokisi engcwatywe.
Ulwakhiwo lweqokobhe: Iqokobhe lenziwe ngebhodi ene-aluminiyam-zinc-clad, umphezulu ugqunywe ngamaplanga, kwaye phezulu luphahla lwethayile lwentsimbi.Amagumbi e-substation ahlukaniswe ngamagumbi amancinci azimeleyo aneeplate zetsimbi, kwaye axhotyiswe ngezixhobo zokukhanyisa.Isigqubuthelo esiphezulu sisakhiwo esine-double-layer, esinokuthi sithintele ukushisa kwemitha ekunyuseni ubushushu bangaphakathi kwaye kwangaxeshanye ube nomoya olungileyo.
Iyunithi ye-high-voltage: Ikhabhinethi ephezulu yombane ithatha i-SF6 insulated ring network cabinet okanye i-SF6 load switch switch cabinet, enesakhiwo esincinci, ubungakanani obuncinci, ukuthembeka okuphezulu, ubomi benkonzo ende kunye nokugcinwa kwamahhala.
Iyunithi ye-voltage ephantsi: Ikhabhinethi ye-low-voltage ithatha iKhabhinethi ye-GGD, enokuthi ixhotyiswe ngemitha, i-outlet, umlinganiselo, kunye ne-capacitance imbuyekezo ezenzekelayo izixhobo ngokweemfuno zomsebenzisi.
Iyunithi yeTransformer: I-transformer ithatha ukunyuka kobushushu obuphantsi, ilahleko ephantsi ye-transformer ephantsi komhlaba, i-high-voltage side ye-transformer ithatha iplagi yentambo evalwe ngokupheleleyo, ifakwe ngokupheleleyo, kwaye icala eliphantsi-voltage lithatha i-low-voltage etywiniweyo. isixhobo sokuphuma, nokuba i-transformer intywiliselwe ngokupheleleyo emanzini Ukusebenza okuthembekileyo, kwaye i-transformer ifakwe kwibhokisi yokungcwaba kuqala, kwaye emva koko ingcwatywe emhlabeni.Ingxolo ye-transformer ayiyi kusasazeka emhlabeni, ukukhusela ukungcoliswa kwengxolo.Ukuba i-oyile ivuza i-oyile, i-oyile iya kuvuza kuphela kwitanki engcwatywe kwaye ayiyi kungcolisa indalo.
Ngaphambili: ixabiso eliphantsi China Zhegui Electric 1250kVA 15/0.4kv 11/0.4kv Compact Cubicle Transformer Substation kwi Rated Voltage 11kv 13.8kv 15kv
Okulandelayo: IsiGaba esiLungileyo soMsebenzisi kuShishino oluPhezulu lwaseTshayina kunye noxinzelelo oluphezulu lweValve yokuLawula ukuHamba komphunga